LG G2 ကို LG ၏တရားဝင် Android Lollipop သို့မွမ်းမံနည်း | Androidsis
Francisco Ruiz | | LG, လဲ tutorial, Android ဗားရှင်း
အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ဒီလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာသစ်မှာ LG G2 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်လ်ပိုကောင်းအဖြစ်အားလုံးလူသိများ D802။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Android terminal ကိုနောက်ဆုံးပေါ် Android Lolipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အထူးအသုံးချထားသော Rom မှတဆင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်ပြသမည်။ LG G2 Model အတွက်တရားဝင် LG Rom ကိုရီးယားပိုင်နက်မှာ F320K မော်ဒယ်လ်ကိုရောင်းချခဲ့သည်။
သင်လိုချင်လျှင်ယခုသင်သိလိမ့်မည် သင်၏ LG G2 ကို Android Lollipop ၏တရားဝင် version သို့အဆင့်မြှင့်ပါ ဒီအန်ဒီရဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပြုပြင်ထားသော Recovery နဲ့ Android terminal ရဲ့ Root ကိုဆုံးရှုံးဖို့ငြင်းဆန်နေတယ်ဆိုတဲ့သီးခြားသတင်းအားလုံးကိုစမ်းကြည့်ဖို့၊ ဒါကသေချာအောင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ LG ၏တရားဝင် Android Lollipop ဗားရှင်းကိုရီးယား G2 ၏ကိုးရီးယားပုံစံ နှင့် LG ၏ကိုယ်ပိုင်အက်ပ်များအားလုံးသိမ်းထားပါ.
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ SuperSU ကို install လုပ်ပြီး Root permissions ရှိဗီဒီယိုမှာ Recovery TWRP ကိုကျွန်တော်မထည့်နိုင်သေးဘူး။ rom Flashing မှာဖျက်လိုက်ပြီလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ငါပြုပြင်ထားသော Recovery နဂိုအတိုင်းရှိနေသည်ဟုသင့်အားငါပြောရမည်အဘယ်ပြောင်းလဲမှုများက၎င်းကိုထည့်သွင်းနည်းဖြစ်သည်၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့အရင်ကဲ့သို့တနည်းနည်းဖြင့်ရိုက်ထည့်ရမည်။ အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချပါLG အမှတ်အသားပေါ်လာပြီးခလုတ်များကိုလွှတ်လိုက်သော်လည်း၎င်းအားထပ်မံနှိပ်သောအခါတစ်ချိန်တည်းမှာ နှိပ်၍ ခလုတ်များကိုမလွှတ်ဘဲနှိပ်ရမည်။ အသံအတိုးအကျယ်ကိုတက်ပေါင်းအသံအတိုးအကျယ်ကိုဆင်း LG G2 Korean model မှဤ Lollipop ဗားရှင်းအသစ်တွင်ပြောင်းလဲသွားသည့် Hard Reset ဖန်သားပြင်ကိုကျွန်ုပ်တို့မရမှီတိုင်အောင်။
ဒီဖိုင်များကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များ တရားဝင် LG ပေါ်အခြေခံပြီး Android Lollipop Rom ဖြစ်သည် LG G2 ၏ကိုရီးယားမော်ဒယ်ကိုအောက်ပါလင့်များမှကူးယူနိုင်သည်။
TWRP ဗားရှင်း 2.8.4
D20 များအတွက် Bootloader 802H
Custom Rom Android Lollipop ၏တရားဝင် LG G2 သည် LG GXNUMX ဖြစ်သည်
download လုပ်ထားသောဖိုင်များအားလုံးသည် LG G2 ၏ internal memory ထဲသို့ကူးယူပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့သည် decompress မလုပ်ဘဲကဲ့သို့ကူးယူထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ Terminal ကို Recovery mode ဖြင့်သာမန် key ပေါင်းစပ်ကိုပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မည် ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစီးတွင်ပူးတွဲပါသောဗွီဒီယိုတွင်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းမှတ်ချက်ပေးသည့်အဆင့်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်။
ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုသင်လိုက်နာရန်အရေးကြီးသည် သူတို့ထဲကတစ်စုံတစ်ခုကိုကျော်သွားပါစေများသောအားဖြင့်ဤညွှန်ကြားချက်အတိအကျကိုလိုက်နာခြင်းသည်သင်၏ Android ဆိပ်ကမ်းရှိ Rom များ၏အလင်းအမှောင်ပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်ရှင်းလင်းချက်သည်နိုင်ငံတကာ LG G2 D802 မော်ဒယ်အတွက်သာမှန်ကန်ကြောင်းသတိရပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » [ဗွီဒီယို] LG G2 ကို LG ၏တရားဝင် Android Lollipop သို့မွမ်းမံရန်
56 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Matthew Gomez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အကူအညီအနည်းငယ်၊ D805 အတွက်ဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်ဘယ်မှာယူရမလဲ။
Mateo Gomez အားပြန်ပြောပါ
သင် D805 တွင်ရုံးသုံး Lollipop ကိုဘယ်လိုရနိုင်လဲ။
Kevin Baca သို့ပြန်သွားပါ
အရာအားလုံးperfectlyုံအလုပ်လုပ်သည် Quick Remote၊ Quick Windows၊ Q မှတ်စုများစသဖြင့်
အဘယ်ကြောင့်သင်ကျွန်ုပ်၏ d806 တွင်အလုပ်မလုပ်ဟုသင်ထင်သနည်း။ ၎င်းသည်အုတ်ခဲဖြစ်နေဆဲ lg logo သို့ရောက်ရှိပြီး၎င်းသည် ၃ စက္ကန့်တွင်ရှိနေသည်။ ၎င်းကိုငါပိတ်ထားသည်အထိထပ်ခါတလဲလဲပြန်လည်စတင်သည်။ သူကငါကသင်ခန်းစာ၌ရှိသကဲ့သို့ငါပြီးပြည့်စုံသောအမှုကိုပြု၏ကြောင်းရှင်းလင်းပေမယ့်ဘာမျှမပျောက်နေသည်ဘယ်အရာကိုငါကြိုးစားခဲ့3ကြိမ် ... ကြိုးစားခဲ့?
ဤနေရာတွင်ရှင်းလင်းချက်သည်နိုင်ငံတကာ LG G2 D802 မော်ဒယ်အတွက်သာမှန်ကန်ကြောင်းသတိရပါ။
ငါ install လုပ်ပြီးသည်နှင့် d806 ၏ baseband ကို boot လုပ်ရန်အတွက်သာကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်အသံမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
၎င်းသည် d802 မော်ဒယ်အတွက်သာဖြစ်ကြောင်းဗွီဒီယိုနှင့်ပို့စ်တွင်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။
Mathias၊ မင်းကအရေးကြီးတဲ့လူရှုပ်တစ်ယောက်ပါ သင်ဤအရာများနှင့်ကစားစရာမလိုပါ။ 806. အတွက်သီးခြား port တစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်မျှော်လင့်သင့်သည်။ သင့်ကိုလမ်းပြပေးနိုင်မလား xda ကိုကြည့်ပါ။
tuvieja enntanga အားပြန်ပြောပါ
Alvaro Baltazar ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ g2 802 ကို lolipop xD ပြောင်းလိုက်ပြီလားဆိုတာကြည့်ပါ
Alvaro Baltazar အားပြန်ကြားပါ
Enyer Carreño ဟုသူကပြောသည်
ဖရန်စစ္စကိုဘယ်လိုနေလဲ။ အရင်ကကျွန်ုပ် LG g2 d802 ကို android 4.2 and 4.4 ကနေသင်ခန်းစာတွေနဲ့အတူ update လုပ်ပြီး clockworkmod ကို recovery အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးအရာရာတိုင်းဟာပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ နောက်တော့ Xdabbeb's Camera / Video အတွက် modal ကို install လုပ်ဖို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာနောက်တစ်ခုကိုလည်းလိုက်ခဲ့တယ်။ ငါ Lollipop ကို update လုပ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အရင် recovery မတူတဲ့အတွက်နဲ့ camera mod ကို install လုပ်တဲ့အတွက်အရင်ကပြproblemsနာမရှိဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံးငါလမ်းညွှန်ပေးပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ်စာလုံးနှင့် voila သို့သင်ခန်းစာအသစ်ကိုလိုက်နာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးစားပါတယ်
သင်ပြanyနာမရှိတော့ပါ။ ပထမဆုံး wipes မပါပဲ recovery zip twrp ကို flash လုပ်ပြီး flash bootloader, firmware နှင့် supersu ကိုပြန်လည်ရယူရန်ပြန်လည်စတင်ပါ။
rom သည်၎င်း၏ port အကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုရန်ဖြစ်သော exda developer များနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
androidsis ၏သူငယ်ချင်းမင်္ဂလာပါပထမ ဦး စွာဤအလွန်ကောင်းမွန်သောစာမျက်နှာနှင့် YouTube ချန်နယ်အတွက်သင့်ကိုဂုဏ်ပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏မေးမြန်းချက်သည်အောက်ပါအတိုင်းဤ LG G2 d805 သို့လျှောက်ထားနိုင်သည် (သို့) သင်မော်ဒယ်လ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်အချက်အလက်မဆိုရှိပါသလား။
ချီလီမှ Coordial နှုတ်ခွန်းဆက်သ။
မင်္ဂလာပါထည့် ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျန်တဲ့အခြားတွေလိုပဲကျွန်တော်မှာ D805 ကိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းရှိသလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!
ဖရန်ကို ဂွန်ဇာလက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါက Kat Kit သို့ပြန်သွားနိုင်ပါသလား။ သင့်မှာဘယ်လိုပြန်သွားရမလည်းဆိုတာသင်ခန်းစာရှိပါသလား။
Franco Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
သင်၏ထည့် ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Francisco ကျွန်ုပ်၏ lg g2 lollipop နှင့်ရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ဇုန်နှင့်အလိုအလျောက်အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပြီးမည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိပါ။ ဤအစ်ကိုရမ်သည်ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာလည်ပတ်လိုသောအရာအားလုံးဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး
နောက်တစ်ခုကတော့ 2g / 3g / 4g ကိုကျွန်တော်အရင်ကမလုပ်ခဲ့ဖူးသောအရာတစ်ခုကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည်
Deibys Artigas ဟုသူကပြောသည်
Navigation bar အရမ်းပါးတာကပုံမှန်လား။
Deibys Artigas အားပြန်ပြောပါ
အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အသံလျှော့ချခြင်းသည်ပုံမှန်ဖုန်းကိုစတင်သည်။ သို့သော်“ safe mode” မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်အောက်ခြေရှိ semi-transparents ဖြင့်အမြဲတမ်းပေါ်လာသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပါ ၀ င်သောအသံပမာဏပိုမိုသောပမာဏကိုဖိ။ သို့မဟုတ်ပိုမိုသောအသံပမာဏကိုပါလုပ်ပါက၎င်းသည်နောက်တစ်ကြိမ်ပိတ်သွားသည်
ထို့နောက် twrp ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
Rom သည် FM ရေဒီယိုမပါဘဲလာသည်။ နေ့စဉ်သုံးပြီးကတည်းကယခင် rad သို့ပြန်သွားချင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် "rebooter" application ကို install လုပ်ပြီး recovery ထဲမှတိုက်ရိုက်ပြန်လည်စတင်နိုင်သည်။
Deibys Artigase ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုများစွာကျဆင်းလာသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများရပ်တန့်သွားခြင်း၊ မမျှော်လင့်သော reboots များနှင့်ပုံမှန်ထက်များသောအားနည်းချက်များရှိနေသည်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက် ROM ဖြစ်ရန်သင့်လျော်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Deibys Artigase သို့ပြန်သွားပါ
ငါသည်ဤ ROM ကိုနှင့်အတူတစ်နေ့လျှင် 2/3 reboots ကနေခံစားရတယ်။ ဒါဟာလုံးဝတည်ငြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ scrolling ကိုသာရွေးထားသည့်တိုင် Lollipop သတိပေးချက်များသို့သော့ခတ်မျက်နှာပြင်မှတိုက်ရိုက်သွားခွင့်မပြုပါ။ ကင်မရာသည်ပုံရိပ်အရည်အသွေးနည်းပါးပုံရသည်။
ကားလို့စ် Alfredo Guillen Montufar ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ မင်းငါ့ကိုနင့်ကိုစော်ကားတော့မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါ 802 အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပေမယ့်ငါ 805 ထဲမှာထည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအုတ်ထဲကျသွားတယ်။ ဒါတောင်မှငါ recovery ထဲကို ၀ င်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါနင့်အခြား model အတွက် flash လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးငါပထမ model (အပေါ်မှာ) ထားလိုက်တယ်။ ငါဖုန်းကို fastboot mode မှာထားခဲ့ပြီး recovery mode သို့မဟုတ် download mode သို့မသွားတော့ပါ။ ၎င်းကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူမည်ကိုရှာဖွေပြီးကျွန်ုပ်သည် download mode ၌ပင်စတင်နိုင်ရန်စီမံနိုင်ခဲ့သည်။ LG မှမည်သည့် software မှ၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိသောကြောင့် Ubuntu ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း၎င်းကိုမသိရှိခဲ့ပါ။ ငါ Flash tool ကိုကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဘာမျှမ။ သောကြာနေ့ကတည်းကအဖြေရှာနေတာဘာမှမရှိဘူး !!!
ကားလို့စ် Alfredo Guillen Montufar ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ့သူငယ်ချင်း။ အနည်းဆုံးဖုန်းကသင့်ကိုဖွင့်သလား၊ ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုဘာမှမလုပ်ဘူးလား။ မင်းရဲ့ကိစ္စကိုငါစိုးရိမ်တယ်။
ချစ်သူငါဒီကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုထပ်တူအဖြစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့🙁 plz help! ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး
Wenas လူမျိုးကျွန်ုပ်သည် G2 D802 ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပြီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Fran ၏ရှင်းလင်းချက်အရကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသည်။ အစတွင်၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာသွားခဲ့သည်။ သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအမှန်တရားကို xD ၏ထူးဆန်းသော reboots များစွာကိုငါကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ငါကအဖြစ်သွားအဖြစ်အစမှအစအရာအားလုံးကို flase ပြန်သွားပါ။ Xq နှင့် 12 စင်တီမီတာ cyanogen ကြိုးစားခဲ့ငါ hehe မကြိုက်ဘူး။
Antonio Jesus အားပြန်ပြောပါ
ငါစမ်းသပ်တာကို ၃ ရက်လောက်လုပ်ပြီးပြီ။ ပြီးပြည့်စုံတော့မယ့်အချိန်မှာထူးခြားတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကညမှာငါရှိနေတဲ့နောက်ခံပုံပျောက်သွားပြီးနံနက်ယံ၌ LG ကိုယူဆောင်လာသူနဲ့အတူငါရှာတွေ့ပြီဆိုတာပဲ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ငါအခန်းနှင့်အတူရှိခဲ့သော ၃ ရက်အနည်းဆုံး ၂ ရက်၊ ယနေ့ဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိပါ။ အမှားပြင်ဆင်မိလျှင်၊ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်စုံလျှင်၊ အရာအားလုံးသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မိုးတိမ်မှလာသည်။ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ဆိတ်ကွယ်ရာ Antutu မှာရမှတ်3ပေးရမယ်။ တိမ်များနှင့်တူသည်
ငါမှတ်ချက်ပေးရန်ဤအရာကိုသင်မပြုလုပ်ပါ။ lg တံဆိပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ကဒ်ပြားပေါ်တွင် pin သို့မဟုတ်ဘာမှမထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အန်တိုနီယိုယရှေုသညျအကြှနျုပျကိုမဟုတျပါ၊ အနည်းဆုံးတော့ယခုအချိန်အထိသုံးရက်တွင် ၂ ခုသာဖယ်ရှားထားပါသည်။ နံရံကပ်နံရံများကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုပါကပြန်လည်ဖွင့်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သတိမထားမိပါ။ အိပ်နေစဉ်
ကျွန်ုပ်တွင်အန်တိုနီယိုယရှေုနှင့်တူညီသောပြproblemနာရှိခဲ့သည်။ မကြာခဏကျွန်ုပ်ပြောရမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်စတော့ရှယ်ယာအရောင်းဆိုင်များသို့ပြန်လာခဲ့ခြင်း၊ ဤအသစ်ပြောင်းခြင်းသည် download mode ကိုပျက်ပြားစေပြီးမူလ rom သို့ပြန်သွားရန်မဖြစ်နိုင်သည့်ကိစ္စများလည်းရှိသည်။ လူတိုင်းကသူတို့ဘာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပေမယ့် KDZ ကနေတဆင့်ငါမထောက်ခံဘူး။
ဒီညမှာပဲထပ်တူပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ...
ငါ၎င်းကိုအားသွင်းနေပြီးတုန်ခါမှု ၃ စက္ကန့်မှ ၄ စက္ကန့်တိုင်းတုန်ခါလာသည်။ တုန်ခါမှုတစ်ခုစီကအမည်းရောင်မှကျွန်ုပ်၏နောက်ခံပုံသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
အခန်းကတော်တော်လေးကောင်းနေပြီ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့ကိုမကောင်းတဲ့ခံစားချက်ပေးနေတယ်။ ငါထပ်မံတပ်ဆင်တော့မယ်မထင်ဘူးဆိုရင်မိုးအရမ်းထူနေတယ်။
ကျွန်တော်ပြောရမှာက uninstall လုပ်ပြီးရင် reinstall ပြန်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာထပ်မံမအောင်မြင်သေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ bug (သို့) ပျက်ကွက်မှုမရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့သွားတာပါ။
သို့သော်လည်းငါသည်နှစ်ရက်နှင့်ယခုအချိန်တွင် 100% ပြီးပြည့်စုံသောနှင့်အရာခပ်သိမ်းworkingုံအလုပ်လုပ်ခဲ့ဟုပြောသည်
တစ်စုံတစ်ယောက်ကဒီဟာကိုကြိုးစားပြီး download link ကိုကူးယူနိုင်တယ်
၃ ပတ်ကြာတဲ့အခါ gps ကိုသုံးတဲ့ applications တွေကိုငါအသုံးပြုချင်တိုင်းပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်
HTCMania> LG Zone> LG G2> ROMs နှင့် LG G2 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
[ROM] BKD Lollipop နောက်ဆုံး Lite 5.0.1 (D802 တစ်ခုတည်းသာ)
ကျွန်တော် ၅ ရက်စမ်းသပ်ပြီး ၁၀၀% ထောက်ခံပါတယ်
၎င်းတို့သည် reboots၊ လွှမ်းခြုံမှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ gps အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည် reboot လုပ်ခြင်းစသည့် bug များကိုပြုပြင်ပေးခဲ့သည် ...
အကျုံး ၀ င်သည်မှာဇိမ်ခံကားဖြစ်သည်။ စတော့ရှယ်ယာ ၂၀ နာရီထက်ပင်ကောင်းသည်
မြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ငြိမ်၊ အရည် ... ၎င်းသည်ပိုးကဲ့သို့သွားသည်
ဗားရှင်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာစတော့ရှယ်ယာပိုများပြီးအခြားတစ် ဦး တွင်အချို့သောထည့်သွင်းထားသော mods များရှိသည်
ငါ lollipod2နှင့် gpro 11.5 ၏ ac2 သစ် propro v5.0.1 port goll XNUMX ကိုစမ်းသပ်ပြီး၊ အချို့သော built-in mod များနှင့်လည်းလျင်မြန်စွာ၊ အရည်ပျော်။ ဘက်ထရီစားသုံးမှုလည်းမြန်ဆန်သည်။ လွှမ်းခြုံမှုနှင့် reboot များဆုံးရှုံးမှု
နှစ် ဦး စလုံးဟာအလွန့်အလွန်ထူးဆန်းတယ်၊ ငါဟာပထမ ဦး ဆုံးထက်အရသာရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ
သူတို့နှစ်ခုစလုံးသည် HTCmania တွင်ရှိသည်
ငါလွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်ကဒီကို install လုပ်ပြီးအဲဒါကိုတစ်ချိန်လုံးပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်ပြီးအဲဒါကကျွန်တော့်ကို Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုနဲ့ဒေတာတွေနဲ့ပြproblemsနာတွေဖြစ်စေတယ်။ ဒါပေမယ့်မနေ့ကပြန် install လုပ်လိုက်တယ်။ တကယ်တော့အဲဒါဟာငါ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတယ်၊ မိုဘိုင်းဖို့နောက်ထပ်ဘဝ။ ကျွန်တော်အကြံပြုပါသည်😉
အရမ်းဆိုး update ကို:
နောက် ဦး ဆောင်ဆုံးရှုံးမှု
ငါကအကြံပြုသည်မဟုတ်, တရားဝင် update ကိုဤမျှလောက်များစွာသောပြproblemsနာများရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းတကယ်မျှော်လင့်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်သည် LG G2 D802 ရှိသော်လည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်သို့ ၀ င် ရောက်၍ မရပါ။ ပြန်လည်စတင်ပြီးပြန်လည်စတင်ခြင်းသာပြုလုပ်သည်။
rom ကို install လုပ်ပြီးတဲ့အခါပြန်လည်စတင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်လို့လာပါ။ ငါ့ကိုပြန်ပို့ခွင့်မပြုပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒေတာသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။
သူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်မှာ 2GB LG G802 D32 ရှိတယ်၊ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Lollipop ကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ တရားဝင် KDZ ကိုအော်ပရေတာအမှတ်အသားမရှိပဲအီတလီဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး LG FlashTool 2014 ဖြင့်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်အဓိကဘက်ထရီယိုစီးမှုမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။ ငါ APNs ကိုလက်ဖြင့်သာသွင်းရသည်။ မင်းကိုအစေခံမယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ် ချီလီမှကြိုဆိုပါတယ်။
download link ကိုကျွန်တော်ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ ဤသည်မှာရှုပ်ထွေးသော update လုပ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများစွာသည် terminal ကို semi-brick တွင်ထားခဲ့ကြပြီး Linux terminal မှတဆင့်အဆင့်မြင့်ဗဟုသုတဖြင့်ပြန်လည်ကြိုးစားနိုင်ပြီးအားထုတ်မှုများစွာဖြင့်ဖြစ်သည်။
ငါ terminal ကို fix နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကို plz ကြည့်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု ! w3.fb.com/stefano.viacava သင်လိုချင်ပါကဒီမှာရှိ plzz
အတော်လေးမိုက်မဲသောမေးခွန်း: terminal ကိုဘာမှမလုပ်မီအမြစ်တွယ်နေရမည်လော
ချစ်စရာငါ movistar နှင့်အတူချီလီ၌ g2 ရှိသည်။ ငါကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး .. အရာအားလုံးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် install လုပ်ခဲ့ပေမယ့်အခုတော့ LG logo မှာပြန်လည်သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဘယ်ပြည်နယ်ကိုမပြန်နိုင်တော့ဘူး။ လုပ်ပါ 🙁
ငါမှာ lg g2 d802 ရှိတယ်၊ သင်ထည့်လိုက်တဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်လုပ်တယ်။ အဲဒါက lg ဖန်သားပြင်မှာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပိတ်ပြီး lg လိုဂိုထွက်လာတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သူကငါ့ကို recovery mode သို့သွားခွင့်မပြုပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
မင်္ဂလာပါ ကောင်းသောသင်ခန်းစာ။ ကျွန်ုပ်၏ g12 တွင်စင်တီမီတာ (၁၂) ထည့်သွင်းလိုသောမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည် သင် Bootloader လိုအပ်ပါသလား? ထိုသို့ဆိုသော်၊
CM12 ကို Kit Kat မှ install လုပ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်သင်ယခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်၊ အကယ်၍ သင်သည် CM12 ကိုတရားဝင် Lollipop မှ စတင်၍ Kit Kat သို့ Downgrade သို့မရောက်ရှိမီတပ်ဆင်လိုပါက။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ LG p725 မှာပြproblemနာတစ်ခုရှိတယ်။ စက်ရုံရဲ့တန်ဖိုးကိုပြန်ယူရန်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပေးခဲ့သည်။ အရင်က Backup လုပ်ဖို့မေ့ခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ယခုဖုန်းသည်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ဖြုတ်တပ်နိုင်သော SD ကဒ်သို့ပုံမှန်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်သို့သာဝင်ရောက်သည်။ ပြန်လည်ရယူခြင်း၊ လက်ရှိဆုံးရှုံးသွားသော rom သည် gimgerbread 2.3.6 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းသည်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုရယူရန်သာဖြစ်သည်။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော sd သည် rom အသစ်တစ်ခုကို install လုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး gimgerbread ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ kitkat (သို့) lolipop လို rom အသစ်တစ်ခုကိုသင် install လုပ်ဖို့အတွက် change kernel ကို flash လုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ recovery mode ကနေလုပ်လို့ရမလားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။
Tavo QG ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်း၊ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးသင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်မွမ်းမံရန်အတွက်ဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တင်ပို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ထံပို့နိုင်လျှင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ D805 မော်ဒယ်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်ဤပစ္စည်းကို Lollipop နှင့်အမှန်တကယ်ကြိုးစားလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်မနှစ်သက်ပါ။ ဒီ version အတွက် ACT ကိုတစ်နေ့ဖြန့်ချိဖို့ LG ကိုတစ်နေ့စောင့်ချင်တယ်
Tavo QG ကိုစာပြန်ပါ
lg g2 vs980w အတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ပထမလင့်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ့ကိုကူညီပေးမယ့် LG2 980 ကိုအမြစ်ရှာနေတာ